သတင်း - သက်တမ်းတိုး-ထုတ်လွှတ်သော deworming အတွက် ချိုမြိန်သောနေရာ
တိုးချဲ့ထုတ်လွှတ်သော သန်ကောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကျွဲနွားလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်—နေ့စဉ်ပျမ်းမျှအမြတ်များမှု၊ မျိုးပွားမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်မှုနှင့် တိုတောင်းသော သားပေါက်ကြားကာလအနည်းငယ်—သို့သော် အခြေအနေတိုင်းတွင် မမှန်ပါ။
မှန်ကန်သော deworming protocol သည် တစ်နှစ်တာ၏အချိန်၊ လည်ပတ်မှုအမျိုးအစား၊ ပထဝီဝင်နှင့် နွားတစ်ကောင်ရှိ ကပ်ပါးစိန်ခေါ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။တိုးချဲ့ထုတ်လွှတ်သော သန်ကောင်သည် သင့်ခွဲစိတ်ကုသရန် သင့်လျော်မှုရှိမရှိကို ကြည့်ရှုရန် သင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဆရာနှင့် ဆွေးနွေးပြီး အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
လက်ရှိ dewormer ရွေးချယ်စရာများ
စျေးကွက်တွင် deworming ထုတ်ကုန်များ၏ ယေဘူယျအမျိုးအစား နှစ်မျိုး သို့မဟုတ် အမျိုးအစားများ ရှိသည်-
Benzimidazoles(ပါးစပ်ပိုးကောင်များ)။ခံတွင်းပိုးကောင်များသည် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကို လျော့နည်းစေပြီး ကပ်ပါးကောင်များကို သေဆုံးစေသည့် ကပ်ပါးကောင်များ၏ မိုက်ခရိုတီဘီများကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။အဆိုပါ ခေတ္တခဏ ထုတ်ကုန်များသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော ပိုးများနှင့် အခြားပိုးများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။အတွင်းပိုင်းကပ်ပါးကောင်များသည် သတ်နိုင်စွမ်းအား အနည်းငယ်သာရှိသည်။
Macrocyclic lactones။အဆိုပါ dewormers အတွင်းရှိတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အာရုံကြောအကြောသေစေသည်အတွင်းနှင့်ပြင်ပကပ်ပါးကောင်များ။Macrocyclic lactones သည် benzimidazoles နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကပ်ပါးပိုးများကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ဤပိုးသတ်ဆေးများကို တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။သွန်းလောင်း, ထိုးဆေးနှင့်တိုးချဲ့ထုတ်ဝေခြင်း။ဖော်မြူလာများ။
လောင်းထည့်ခြင်းနှင့် ထိုးဆေးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရက်အနည်းငယ်မှ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိ နေရာတိုင်းတွင် ကျန်ရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည်။
တိုးချဲ့ထုတ်လွှပိုးကောင်များသည် ကပ်ပါးကောင်များကို ရက်ပေါင်း 150 အထိ ထိန်းချုပ်သည်။
“ကျွဲနွားတွေက သန်ကောင်တွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ မကောက်ယူနိုင်တဲ့ feedlots တွေအတွက် ခံတွင်းပိုးကောင်တွေနဲ့ လောင်းချတာတွေက အရမ်းကောင်းပါတယ်” ဟု David Shirbroun, DVM, Boehringer Ingelheim မှ ပြောကြားခဲ့သည်။“ကြာရှည်စွာ စားကျက်ကာလ ရှည်လျားသော စတော့နှင့် နွားခြေသလုံး နွားများတွင် ရက်ပေါင်း ၁၅၀ အထိ ကြာရှည်သော ပိုးသတ်ဆေးသည် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် များစွာ အဓိပ္ပာယ်ရှိစေပါသည်။
“တိရစ္ဆာန်ငယ်များသည် ကပ်ပါးပိုးများကို အခံရနိုင်ဆုံးဖြစ်ပြီး တာရှည်ခံကပ်ပါးထိန်းချုပ်မှုမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အကြီးမားဆုံး အမြတ်ပြန်ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်” ဟု ဒေါက်တာ Shirbroun က ဆက်လက်ပြောပြသည်။"တိုးချဲ့ထုတ်လွှတ်သော သန်ကောင်နှင့် တူညီသော ထိရောက်မှုရရှိရန်၊ စားကျက်ရာသီတစ်လျှောက်တွင် သမားရိုးကျ ပိုးကောင်တစ်ကောင်၏ ကုသမှုသုံးမျိုးခန့် ပေးရပါမည်။"
ဒါဆို သက်တမ်းတိုးပေးမယ့် သန်ကောင်တွေကို ရာသီတစ်လျှောက်လုံး ကြာရှည်ခံအောင် ဘာက လုပ်တာလဲ။ဤသည်မှာ နည်းပညာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။
ကနဦး အရေပြားအောက် ထိုးဆေးထိုးပြီးနောက်၊ ကပ်ပါးကောင်များကို ချက်ချင်းထိန်းချုပ်ရန် ဆေး၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည် မြင့်မားသောအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသည်။
တိုးချဲ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပညာသည် ကျန်ရှိသောဆေးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဂျယ်မက်ထရစ်အဖြစ်သို့ ထုပ်ပိုးနိုင်စေပါသည်။ဤ matrix သည် တိရိစ္ဆာန်ရှိ ကုထုံးအဆင့်များထက် သန်ကောင်ကို ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။
ကနဦးကုသမှုခံယူပြီး ရက်ပေါင်း 70 မှ 100 ခန့်အကြာတွင် matrix သည် ပြိုကွဲသွားပြီး ဒုတိယအထွတ်အထိပ်ကို ထုတ်ပေးသည်။ရက်ပေါင်း 150 ပြီးနောက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားသည်။
ဒေါက်တာ Shirbroun က "သက်တမ်းတိုး-ထုတ်လွှတ်တဲ့ ပိုးကောင်တစ်ကောင်ဟာ ပုံမှန်ပိုးသတ်ဆေးထက် ပိုမြန်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာ Shirbroun က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။“သို့သော်လည်း၊ စျေးကွက်တွင်လက်ရှိသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ထိုးဆေးထည့်ထားသောသန်ကောင်များကဲ့သို့ပင်တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားသည်။၎င်းသည် ၎င်း၏ နှေးကွေးသော လွှတ်ထုတ်မှုအဆင့်တွင် ကုသရေးအဆင့်အောက် မလျော့ဘဲ၊ ၎င်းသည် ကပ်ပါးပိုးများကို ခုခံမှု မြန်ဆန်စွာ စတင်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။”
ခုခံအားကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဒေါက်တာ Shirbroun သည် refugia အကြောင်း သင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဆရာနှင့် ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုထားသည်။Refugia (နွား၏တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုးသတ်မထားသော) သည် ကပ်ပါးကောင်ခုခံမှုစတင်ခြင်းကို နှောင့်နှေးစေသည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။dewormers များထံမှ "ခိုလှုံရာ" တွင်ကပ်ပါးကောင်လူဦးရေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထားခဲ့ခြင်းသည် dewormer ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမူးယစ်ဆေးဝါး-ခံနိုင်ရည်ရွေးချယ်မှုဖိအားကိုလျော့နည်းစေသည်။
စမ်းသပ်မှုတွင် ထပ်တိုး-ထုတ်လွှတ်မှု ပိုးသတ်ဆေးထည့်ခြင်း။
Wyoming နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ပြည်နယ်များတစ်လျှောက်တွင်ရှိသော နွား-နွားသငယ် ခွဲစိတ်မှု ရှစ်ခုနှင့် 11,000 ဦးခေါင်း feedlot ၏မန်နေဂျာ Rob Gill သည် သက်တမ်းတိုးသည့် dewormer ကို စမ်းသပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့က နွားမအုပ်စုတစ်စုကို အစိုဓာတ်နဲ့ လောင်းချပြီး ကုသပေးခဲ့ပြီး အခြားအုပ်စုက သက်တမ်းတိုးတဲ့ သန်ကောင်တစ်ကောင်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။“ကြာရှည်ခံတဲ့ သန်ကောင်ကို လက်ခံရရှိတဲ့ နွားမတွေဟာ ဆောင်းရာသီမှာ မြက်ခင်းပြင်က ထွက်လာတဲ့ ၃၂ ပေါင်လောက် ပိုလေးပါတယ်။”
ထုတ်လုပ်သူများသည် ပိုရှည်သော ပိုးသတ်ဆေး၏ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ချီတုံချတုံဖြစ်နိုင်သော်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးအမြတ်များ ရှိကြောင်း Gill မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွဲနွားတွေ ကျက်စားရာကို မထွက်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကုသပေးခဲ့ပြီး အစာကျွေးတဲ့ နေရာ မရောက်မချင်း သူတို့ကို ထပ်မထိရဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။"Dewormer သည် ကျက်စားရာများမှ ကပ်ပါးကောင်များကို ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် feedlot စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် အလေးချိန်တိုးလာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ထိုက်တန်ပါသည်။"
Tမည်သည့်အတွက်မဆို အခမဲ့အကြံပြုချက်များdeworming ထုတ်ကုန်နှင့် အစီအစဉ်
သင်ရွေးချယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို မဆိုထားဘိ၊ သင်၏ dewormers များထဲမှ အကောင်းဆုံးရယူရန် အောက်ပါအလေ့အကျင့်များကို ကျွမ်းကျင်သူက အကြံပြုထားသည်။
1. ရောဂါရှာဖွေမှုများကို အသုံးပြုပါ။ကပ်ပါးကောင်ဦးရေနှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်။တစ်fecal egg count reduction test၊ သို့မဟုတ် FECRT၊သင့် deworming ထုတ်ကုန်များ၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်နိုင်သည့် စံပြုရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်၊ မစင်မျိုးဥအရေအတွက် 90% သို့မဟုတ် ပိုများသော လျော့နည်းခြင်းသည် သင့်ဝမ်းကိုက်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ညွှန်ပြပါသည်။တစ်coprocultureနွားများအတွင်းတွင် အဖြစ်များဆုံး ကပ်ပါးမျိုးစိတ်များကို ရှာဖွေရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကပ်ပါးကောင်ထိန်းချုပ်ရန် ပစ်မှတ်ထားသော ချဉ်းကပ်မှုကို သင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။
2. ထုတ်ကုန်တံဆိပ်ကို အနီးကပ်ဖတ်ပါ။သင့်နွားများ လိုအပ်သော အကာအကွယ်ကို ပေးဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန်။dewormers အတန်းတိုင်းတွင် ၎င်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ ရှိကြပြီး အချို့သော အတန်းများသည် သီးခြားကပ်ပါးကောင်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ထုတ်ကုန်အညွှန်းများကို ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ သင့်နွားအုပ်အတွင်းရှိ အဓိကကပ်ပါးကောင်များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် သန်ကောင်တစ်ဦးစီသည် မည်မျှထိရောက်မည်ကို သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ပိုးသတ်ဆေးကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပါက ၎င်း၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန်လည်း ခက်ခဲသည်။ထုတ်ကုန်ကို မှန်ကန်စွာ သိမ်းဆည်းထားကြောင်း သေချာစေရန် အညွှန်းကို ဖတ်ပါ၊ သင် ကုသနေသော တိရစ္ဆာန်၏ အလေးချိန်အတွက် တိကျသော ဆေးပမာဏနှင့် တိရစ္ဆာန်များကို မကုသမီ သင့်စက်ပစ္စည်းသည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
3. သင်၏တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်နှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ပါ။ထုတ်လုပ်သူတိုင်း၏ အခြေအနေသည် ထူးခြားသည်။နွားနှစ်ကောင်သည် တူညီသည်မဟုတ်၊ ၎င်းတို့၏ ကပ်ပါးဝန်လည်း မဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့် သင်၏တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။၎င်းတို့သည် သင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ကူညီနိုင်ပြီး တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ deworming protocol နှင့် ထုတ်ကုန်(များ) ကို အကြံပြုနိုင်ပါသည်။မင်းရဲ့ စားကျက်ရာသီကာလ၊ မင်းရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ အတန်းအစားနဲ့ စားကျက်စားကျက်သမိုင်းကို ဆွေးနွေးဖို့ စဉ်းစားစရာတွေပါ။
LONGRANGE အရေးကြီးသော ဘေးကင်းရေး အချက်အလက်-သတ်ပြီး ၄၈ ရက်အတွင်း မကုသပါနှင့်။နို့စားနွားမများ၊ သို့မဟုတ် နွားသားငယ်များအပါအဝင် အသက် 20 နှစ်နှင့်အထက် နို့စားနွားမများတွင် အသုံးမပြုပါ။ဆေးထိုးပြီးနောက် နေရာပျက်စီးခြင်း (ဥပမာ၊ granulomas၊ necrosis) ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ဤတုံ့ပြန်မှုများသည် ကုသမှုမရှိဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။နွားမွေးမြူရာတွင် သို့မဟုတ် ၃ လအောက် နွားပေါက်များတွင် အသုံးမပြုပါ။feedlots များတွင် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော လှည့်စားကျက်စားရာအောက်တွင် စီမံထားသော ကျွဲနွားများတွင် အသုံးမပြုပါ။